किया सोल - एक यात्री कार, कोरियाई कम्पनी किया मोटर्स द्वारा निर्मित 2008 देखि। एक पाँच-ढोका पाँच-seater गाडी - शरीर को एक प्रकार यसलाई जारी।
किया सोल: प्राविधिक विनिर्देशों
बाह्य, एक विशाल कार एक राम्रो मानक आकार छ। एक 1,6 MPI पेट्रोल र डिजेल 1.6 VGT:। 166 सेमी र चौडाई -178,5 सेमी मोडेल इन्जिन विभिन्न प्रकारका उपलब्ध - यसको लम्बाइ छत उचाइ रेलहरू संगै, 412sm छ। मात्र 180 मी / घन्टा - जबकि यसको अधिकतम गति अपेक्षाकृत कम छ मिसिन, 10.8 सेकेन्ड को लागि 100 मी / घण्टा गर्न बढाने को सक्षम छ। 1365 किलो को एक पेट्रोल इन्जिन संग अधिकतम ठूलो किया सोल Curb। प्रति 100 किलोमिटर प्रत्यक्ष बाटो इन्धन खपत6लिटर बराबर छ। 9.4 एल / मी - जबकि शहर मार्फत ड्राइभिङ अधिकतम पुग्न संयुक्त चक्र खपत मा, प्रति सय किलोमिटर 7.3 लिटर गर्न वृद्धि हुनेछ। एक डिजेल इन्जिन एक मोडेल लागि, यी तथ्याङ्कले पर्याप्त तल5लिटर प्रति 100 किलोमिटर राजमार्ग, 5.9 आवश्यक मिश्रित चक्र र प्रति शहर सडक 100 किलोमिटर 7.4 लिटर छन्। 340 लिटर को सामान खण्ड को मात्रा।
किया सोल मालिकको समीक्षा
पहिलो कुरा कि कार मालिक भन्न - यसको आकार। बाह्य, जाँच गर्न एउटा सानो minivan विशाल र आरामदायक छ। भित्र,5मान्छे चुपचाप प्रभावशाली आकार र उच्च वृद्धि फिट। तार्किक नियन्त्रण प्यानल Ergonomics - अर्को प्लस मोडेल, को किया सोल। कार मालिक को समीक्षा सबै levers र बटनहरू हात मा धेरै सुविधाजनक स्थित हो भनेर संकेत गर्छ। उहाँले प्ले सुरु गर्न एउटा नयाँ गीत वा एल्बम समावेश गर्न चाहँदा नियन्त्रण कुञ्जीहरू सीधा चालक गर्न स्टेरिड़ मा स्थापित एमपी -3-खेलाडी, आफ्नो हात लिन र सवारी चलाउँदा सडक टाढा तोड्न छैन।
एक पर्याप्त उच्च अवकास (164 सेमी) - किया सोल अर्को फाइदा। मालिक को समीक्षा कि मिसिन आफ्नो Bumpers पक्रने छैन, सीमाना भन्दा छोड्न सजिलो छ संकेत गर्छ। त्यसै गरी, कुनै न कुनै सडक वा ट्रयाक मतभेद संग मा छैन crawling छ, पृथ्वी तल छोएर, र सजिलो जा। किनभने सबैलाई फरक स्वाद छ स्टाइलिश डिजाइन, कार निरपेक्ष लाभ गर्न श्रेय गर्न सकिँदैन, तर धेरै मालिक minivan यो किनभने अन्य कार मा आफ्नो उपस्थिति र otherness को एक विकल्प रोकियो। साथै, मोडेल किया सोल छैन रूपमा साधारण रूस मा, जो यसको मालिक एक अद्वितीय कार मालिक महसुस हुनेछ भन्ने हो छ। सानो कार यो आकार इन्धन र तेल खपत। विश्वसनीयता - थप एक, सायद, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा किया सोल कार।
मालिक को समीक्षा कार दुर्लभ, अधिकांश मानिसहरू सानो समस्या सामना गर्दै तल खण्डन भन्छन्। पनि कहिलेकाहीं तिनीहरूले एक लामो समय प्रतीक्षा छ, सामान सस्तो छैन - तर, माइनस छ। बन जो थप सजिलै देखिने उच्च गति किया सोल कम हल्ला इन्सुलेशन, - वाहन अर्को drawback। मालिकहरूको समीक्षा पनि धेरै अयोग्य अप सिट संग 340 लिटर छ, सामान को मात्रा महसुस भनेर संकेत गर्छ। निस्सन्देह, यो 818 लिटर ठूलो कार्गो अप परिवहन जब यो फिर्ता राख्दै वृद्धि गर्न सकिन्छ, तर यो सिट संख्या कम हुनेछ भन्ने हो।
मेशिन तुरुन्तै, संचालन जवाफ राम्ररी राखिएको सडक, सजिलै संचालित छ। र रूसी जलवायु लागि महत्त्वपूर्ण छ - सजिलो कम तापमान मा शुरू र चाँडै अप warms। अर्को नकारात्मक - कडा निलम्बन, जो चालक सडक मा सबै धक्का र गड्ढे महसुस गर्न अनुमति दिन्छ। यो minivan को बेफाइदा पनि snowmelt ग्लास भरिन्छ किनभने वर्षा र समयमा जो को, साना धक्का, साथै त्रुटिपूर्ण वायुगतिकीय देखि बन्द chipped छ नरम रंग मानिन्छ गर्न सकिएन।
सामान्य मा, कार किया सोल - एक सुविधाजनक, आरामदायक पर्याप्त एक असामान्य डिजाइन। उहाँले शहर बाहिर, साथै लागि दैनिक शहर ड्राइभिङ यात्राको लागि उत्तम छ। कार बाटोमा खडा गर्न चाहनुहुन्छ गर्ने चालकहरुको लागि डिजाइन गरिएको छ, र एक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ परिवार कार।
Astra परिवार - एक परिवार कार
एक वाहन लागि क्सीनन हेडलाइट कसरी चयन गर्ने? क्सीनन दीपक को लाभ
गेट्स - समय बेल्ट: समीक्षा, अवलोकन र वर्णन
पाज-3205 र यसको परिमार्जन पाज-32053
Renault: पुरानो परभक्षी को दोस्रो जन्म
कहाँ र कसरी रेकर्ड कार मा राख्न
एक Nautical माइल के छ र गाँठ के हो?
"घर डर": कसरी "एन्ड्रोइड" मंच मा खेल पिट्न?
एलीसन Krause - अमेरिका संसारको दिनुभएको केटी
Pelican चरा: विवरण र कैरेक्टराइजेशन। , गुलाबी कालो र सेतो र Dalmatian pelicans
Anapa र यसको आकर्षण: ठूलो Utrish
प्रमुदित गाउँ (एडलर) - सोची को सुरम्य कुना को मुख्य आकर्षण
हराएको आवाज: के?